Maxaa la sameeyaa haddii Linux aysan ogaan qalab USB ah? | Laga soo bilaabo Linux
Hadday waligeed tahay kumbiyuutar kumbuyuutar ah ama kumbuyuutar ama kumbuyuutar ayaan ku xiray kombuyutarkaaga qaybinta Linux-ka waxna ma dhicin, taasi waa, isku duubnida xusuusta ma muuqato ama wax ficil ah kuma sameyn kartid kumbuyuutarkaaga ama jiirkaaga, qodobkaan ayaa laga yaabaa inuu xiiso kuu qabo.
In kastoo Halkan waxaan ku talo jirnaa inaan ku siino qaar ka mid ah xalalka ugu caamsan khaladaadka dhici kara, waa iska cadahay in waxa halkan lagu muujiyey uusan dayactireyn wax dekedda USB ah oo xaalad xun ku jirta.
Dhibaatada ugu horeysa ee aan la kulmi karno waa marka aan isku xireyno keydka keydka USB iyo barta buurta aan ka muuqan nidaamkayaga.
Waxaa jira shan tallaabo oo la raaco si loo xalliyo dhibaatooyinka USB ee Linux:
Xaqiiji in dekedda USB-ga la ogaaday
Dayactirka lagama maarmaanka ah ku samee dekedda.
Hagaaji ama hagaaji qalabka USB-ga
Dib u bilow nidaamka qalliinka
Xaqiiji jiritaanka darawallada qalabka.
Aynu eegno mid kasta oo ka mid ah oo aan baranno sida loola macaamilo arrimahan.
1 Xaqiiji in dekedda USB-ga la ogaaday
2 Hubi dekedda USB-gaaga
3 Dib u bilaabi Linux
Waxa ugu horreeya ee la hubiyo marka la gelinayo qalabkaaga USB-ga kombiyuutarkaaga waa haddii la ogaanayo.
Xaalada Windows, si aad u awoodo inaad dib u eegis ku sameyso howshan, u tag maareeyaha qalabka, halkaasoo aad si garaaf ahaan ah u xaqiijin karto haddii qalabkaaga USB la ogaado.
Marka laga hadlayo Linux, waxaan sameyn karnaa wax la mid ah, laakiin caawimaadda terminal, tan waxaan u isticmaali karnaa amarka lsusb.
Halka ay naga siin doonto liiska dhammaan qalabka iyo dekedda USB-ga ee nidaamku ogaado.
Halkan waxaad ku sameyn kartaa waxyaabaha soo socda, fuliya amarka markii ugu horeysay adigoon ku xirneyn aaladda USB-ga halkaana waxaad ku arki doontaa liis, hadda ku xir qalabkaaga oo mar kale amarka sii wad, waxaad ku arki doontaa isbeddelka liiska.
Tan waxaad ku xaqiijin doontaa in qalabkaaga la ogaado, marka laga hadlayo aaladaha kaydinta halkan waxay noqon kartaa dhibaato:
Ma jiraan wax xijaab on qalabka iyo / ama waxa aanu lahayn miiska xijaab on.
Qaabka kala soocgu ma taageerayo nidaamka.
Haddii kale, waa inaan tagnaa tallaabada xigta.
Hubi dekedda USB-gaaga
Haddii qalabka USB-ga aan la soo bandhigin, waxay dhibaato ku noqon kartaa dekedda USB-ga.
Habka ugu fiican ee si dhakhso leh loo xaqiijin karo tani waa in si fudud loogu isticmaalo deked USB ah oo ka duwan isla kombiyuutarka. Haddii qalabka USB hadda la ogaado, markaa waad ogtahay inaad dhibaato ku qabtid dekedda kale ee USB.
Haddii deked kale oo USB ah aan la heli karin, waxaad u baahan doontaa inaad ku tijaabiso qalabka USB-ga kombiyuutar kale ama laptop kale.
Haddii tallaabadani qalabka aan la ogaan, waxaad u qaadan kartaa fikradda laba waxyaalood.
Darawalada qalabka kuma rakiban nidaamkaaga waana inaad raadisaa iyaga ama qalabkaagu horeyba wuu udhaafay.
Caadi ahaan xalku wuxuu ku lug leeyahay hubinta dekedda USB iyo sidoo kale qalabka aan hadda shaqeynin.
Dayactirku wuxuu had iyo jeer udub dhexaad u yahay fiilada USB-ga iyo dekedda kumbuyuutarkaaga. Si kastaba ha noqotee, fiilooyinka USB-ga badiyaa waa la beddeli karaa, halka dekeddaha la hagaajin karo.
Dib u bilaabi Linux
In kasta oo xalkaani u muuqdo mid aan caqli gal ahayn, haddana wuu shaqeynayaa. Ugu horreyntii, hubi haddii joojinta otomaatigga ah ay dhibaatada keenayso. Waxay ku samayn karaan tan iyaga oo dib u bilaabaya kombuyuutarkooda.
Haddii qalabka USB-ga uu shaqeeyo, dekedda USB-ga ayaa helaysa awood.
Tallaabada xigta waa in la hubiyo in tani aysan mar kale dhicin.
Xeeladaha amarka soo socda ee soo socda ayaa loogu talagalay Ubuntu 18.10, markaa hubi nidaamka saxda ah ee ku saabsan qaybinta Linux.
Fur daaqad terminal oo gal:
Tani waa inay soo celisaa qiimaha 2, taas oo macnaheedu yahay in hurdo otomaatig ah la awooday. Waxaad ku hagaajin kartaa tan adoo hagaajinaya sheyga. Gal:
Tan ugu beddel
Taabo Ctrl X si aad u kaydiso faylka una baxdo.
Marka xigta, waxay cusbooneysiiyaan murugada:
Markaad dhammaystirto, dib u bilow nidaamka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Maxaa la sameeyaa haddii Linux aysan ogaan qalab USB ah?
Maqaalka / casharku waa mid aad u cad oo sax ah, waana hore u keydiyey oo u daabacay tixraac mustaqbalka ah. laakiin waxaan hayaa labo fikir.
Waxaan isticmaalaayay Linux mudo 5 bilood ah (maalin wanagsan nidaamkeyga daaqadaha ayaa burburay walina ma fahmin sababta inkasta oo dib u soo celintii isku xigxiga iyo Linux ay laptop cusub siisay noloshayda cusub), wali waxaa jira waxyaabo aanan fahmin oo aanan fahmin iskuna dayo maalin kasta inaad u aaddo akhris iyo barasho wax.
Qofka cusub, sida ay aniga ahaan karto kiiskeyga, oo aan ka imid adduunka Windows, kani waa qaaciddada kiimikada ee baatroolka oo waxay u noqon kartaa wax aan la fahmi karin kuwa u yimaada Linux oo fahmaya wax yar iyo wax aan jirin (waa wax yar kiiskeyga mana yeelo waa isku waqti). Ma jiraan wax hawl ah, barnaamij ama qaab garaaf ah oo sidan loo sameeyo, oo nolosha loogu fududeeyo wax cusub qofka cusub, mise waa wadada keliya ee loo maro, ma aqaan guddiga dajinta ama wax la mid ah.
Tan waxaan ka codsanayaa jaahilnimadayda guud
Aniguna waxaan ku idhaahdaa si xushmad leh.
HADDII ay igu dhici lahayd in dekedda USB-ga aan la ogaan / shaqeyn oo aan lahayn casharradan / daabacaadda, ma garanayo meel aan ka bilaabo.
Ma xuma dardaaran ama wax la mid ah mana rajeynayo inaan ixtiraamo qof, aniga iga fog ... laakiin waxaa jira adduun adeegsadeyaal ah oo tan kaaga sheegaya khadka taliska mana garanayo halka laga bilaabayo.
Subax wanaagsan, waad ku mahadsan tahay faalladaada.
Waan fahamsanahay barta aad ugu tixraacayso dadka cusub, in haddii ay naftooda ku helaan dhibaato sidan oo kale ah inay ku dambeyn doonaan cillad.
Way adkaan lahayd in xal caalami ah loo helo dhibaatada noocan ah, in kasta oo aan ku raacsanahay fikradda ah in la helo qayb garaaf ah oo muujinaysa dhammaan aaladaha ku xidhan (wax la mid ah Windows).
Laakiin la kulanka dhibaatooyinka noocan ah waa dhif iyo naadir.
Waad salaaman tahay, sidee tahay haa, xaqiiqdii waad saxantahay, laakiin waqtigan ma jiro, waxaad isku dayi kartaa inaad fadhiga kaga tagto CTL + ALT + BACKSPACE. Mar labaad ayaad soo galeysaa, laakiin waa isku mid wax qalab garaaf ah haddii uusan ogaan qalabka, taasi waa soo qabashada, waxa ugu fiican ee aadan laaban karin xitaa marka aad beddesho kernel ama aad rakibto software cusub. Kaliya waa inaad ku faraxdaa, waxaa jira casharro aan dhammaad lahayn oo halkaas yaal. Soo dhawow waxaanan rajaynayaa inaad ka heshay oo aad baratay oo aad si raaxo leh ula shaqeyn karto GNU / LINUX.
PS: Kani waa barashada maalinlaha ah ee 'XD'.
Mac> Guul> Linux dijo
Qaabee oo rakib Windows-ka kaas oo taageera
maxaa yeelay mar horaba waa wax laga xumaado in 2018 Linux ay sii wado dhibaatooyinkaas darawalada.
Anigu waxaan ahaa saynisyahan kumbuyuutar ah 15 sano waana in ka badan 6 sano tan iyo markii aan joojiyay isticmaalka Linux si aan u isticmaalo Mac oo ka daalay "dhibaatooyinka yar" ee darawallada. Markaad maamusho inaad mid hagaajiso, usbuuc wiigga ah ayaa la cusbooneysiiyaa oo mar labaad ayuu noqdaa mid xanaaq badan oo hadiyad ahaan 2 waxyaabo dheeraad ah ayaa dhib leh.
Jawaab ku sii Mac> Guul> Linux
Khibrada aad noosheegto, waxaad sameysay tan sanado kabadan server. Wax walbaa ma xuma, mana u dhowaanayaan hal nidaam.
Xaaladdayda waxaan ku keydiyey in kabadan hal qalab (oo ay kujiraan Huawei Smartphone) Linux maadaama tan iyo Windows aaladaha aan la ogaan ama la laadin. Marka laga hadlayo Taleefankayga casriga ah, waxaan si qalad ah u rakibey ROM aan xitaa aaladda aheyn (sida ay wax u dheceen, anigu garan maayo). Tan waxay ku kharribeen qormooyin (boot, system, iwm) taleefankuna wuu dhintey.
Si madadaalo ah oo Linux ah waxay ku ogaatay emmc xasuusta taas oo dhowr maalmood ka dib, aan ku guuleystay inaan rakibo bootka.
Marka laga hadlayo Windows-ka waxay iga caawisay inaan ka soo kabto aaladaha keydinta qaarkood ee Linux aan dib loo soo celin karin.
Ku rakib Windows sidii xal?
OS ah shirkad xirfadlayaal ah oo loogu yeero oo cusbooneysiin kasta ku jabisa wax cusub?
Maya mahadsanid, waxaan doorbidaa inaan barto inaan rakibo darawalkeyga si sax ah oo aanan heysan codsiyada qashinka ah, dukaamada wax ku rakibaya fasax la'aan, luminta feylasha, iyo waxyaabo kale.
Haddii aadan jeclayn Linux, ma aqaan waxa aan ku sameeyo madashan, halkaasoo aanad ku biirin doonin waxyaabo kale oo aan ka qoomameynayo.
Ragga fudud, doodani meel kuma gaadhayaan ereyadan.
Xaaladdayda, waxaan hayaa sida ugu fiican ee labada adduunba, labada nidaam ee hawlgalku aniga iyo guriga waan ku anfacayaa.
Waxaan haystay daaqado iyo hal maalin OS ayaa burburay xitaa haddii aan isku dayo inaan dib u raaco dhowr jeer, ka dib markii dib loo bilaabay, dhibaatadii oo kale ayaa soo noqotay.
Ubuntu Linux waxay ka badbaadisay laptop-kayga inuu joojiyo isticmaalkiisa waxayna siisay fursad labaad nolosha iyo isticmaalka.
Labada adduun baa waxtar ii leh oo noloshayda ii fududeynaya ... mana ahan in Eebbe iyo Ibliis la wanaagsanaado ... waa waaya-aragnimadayda iyo barashada maalinlaha ah ee aanan doonayn inaan ka quusto
wanaagsan, waxaan rajaynayaa in qof akhriyo tan oo uu ka jawaabo waxyaabaha soo socda. USB-ga waxaa aqriya nidaamka (mint 18.3 kde kiiskeyga) laakiin ma nuqulan karo waxna ma dhajin karo, waa sidii in la qori lahaa ilaalin. Wax talo bixin ah kahor ismiidaaminta?
Way igu fiicnayd, aad baad u mahadsan tahay! Waan lumiyay qaabeyntii kumbuyuutarkuna ma aqoonsan, laakiin qoraalkan awgeed, waxaan ku sugnaa terminal-ka waana ka soo kaban karaa dhib la'aan!
Mar labaad mahadsanid
Ku jawaab anra23
Noolow nolasha guud ...
Haddii waxa aan isku xirayaa ay yihiin jiir ...
Maxaan sameeyaa si aan u qaabeeyo, u siiyo farmaajo Roquefort si aan u arko haddii ay u dhimato karaahiyo iyo inay nolosha ku soo noqoto?
Waa inaan lagugu qarin karin inaad ka jawaabto tan «toto .. maxay tahay? wax fiican.
Aniga qudhaydu ka jawaab
Ku jawaab TheSaiyan
Ka anfac badan dameerka xusulka. Dhibaatooyin badan oo kusoo kordhay linka oo aan si fiican loo xallin. Nasiib darrose, ugu dambayntii waxaa habboon in la bixiyo in OS loo helo nidaam hagaagsan ...
maya webi dijo
Wanaagsan waxaan kaliya ku bilaabayaa Linux waana wax fiican inaan waligeen ka noqon doonin isticmaaleyaasha daaqadaha, live gnu / Linux nool
Ku jawaab noe rivera
Dhibaato ayaan qabaa waxay dhigaysaa tan / usr / sbin / grub-mkconfig: 12: / etc / default / grub: usbcore.autosuspend = -1: lama helin fadlan ii sheeg xalka
EasyPDF: waa qalab lagu maareeyo dukumiintiyadaada PDF-ka khadka tooska ah